Arcade ဂိမ်းအမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုးကြိုးငါးမျှား – အမြင့်အမြတ်ဦးပိုင်ငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဗ် Customize. Excellent ကကက်ဘိနက်.
အမြင့်အမြတ် F ကိုishing တစ်ဦးကrcade , GAmE အမြင့်ဦးပိုင်နှင့်အတူ
Arcade ဂိမ်းအမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုးကြိုးငါးမျှား Play လုပ်နည်း
တွင် F ကိုishing တစ်ဦးကrcade , GAmE အမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုဃ်းချုန်း ဖမ်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောငါးရှိပါတယ်, တန်ဖိုးရှိကွဲပြားခြားနားသောအချက်တန်ဖိုးများများမှာအားလုံးသော. ကစားသမားဂိမ်းကာလအတွင်းသူတို့ကဖမ်းငါး၏နံပါတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အမှတ်ရမှတ်တိုးမြှင့်.
အဓိက အမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုဃ်းချုန်း ဂိမ်း features နဲ့ mini ကိုဂိမ်းတွေနဲ့ layered ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကစားသမားတွေပိုပြီးအချက်များဝင်ငွေမှတစ်ဦးမြင့်မားအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်အလှည့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဤသူတို့သသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးလှသည်, ပိုပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအလားအလာ.
အဆိုပါထဲမှာတပ်ဆင်ထား F ကိုishing တစ်ဦးကrcade , GAmE အမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုဃ်းချုန်း ပါဝင်:
1. Kylin – အကြီးအကဲ
အခါ Kylin အောင်မြင်စွာထိမှန်နေသည်, ကွင်းဆက်ကြောင့်ဖမ်းရန်ပြင်သို့ပစ် လိုက်. မည်ဖြစ်ပြီးကြောင့်တိုက်ပွဲ Mode ကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်. တိုက်ပွဲစဉ်အတွင်း, နဂါးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုင်းခခြှေဲပိုပြီးမှတ်ပိုက်ကွန်ကိုဦးမည်. အဆိုပါ အကယ်. Kylin ဒါကြောင့်တစ်ဦးထက်ပိုပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်နှင့် player မြင့်မားဆုအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်.
2. မိုးကြိုး Whale - သူဌေးက
အဆိုပါ Whale ဖမ်းမိသောအခါ Whale တိုက်ခိုက်မှုပေါင်းများစွာလှိုင်းတံပိုးတတ်နိုင်သမျှအများအပြားငါးအဖြစ်ကစားသမားဖမ်းကူညီပေးပါမည်.
3. မာရျနတျငါး - သူဌေးက
အခါ မာရျနတျငါး ဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှအများအပြားငါးအဖြစ်ကစားသမားဖမ်းကူညီပေးပါမည်.